Semalt: साइट स्क्र्याप गर्नको लागि सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामिंग भाषाहरू के हुन्?
वेब स्क्र्यापिंग, डाटा निकासी र वेब कटाईको रूपमा पनि चिनिन्छ, बिभिन्न साइटहरूबाट डाटा निकाल्ने एउटा प्रविधि हो। वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयरले वेब ब्राउजर मार्फत वा हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल मार्फत इन्टरनेट पहुँच गर्छ। वेब स्क्र्यापि usually प्राय: स्वचालित बट्स वा वेब क्रलरहरूको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिन्छ। तिनीहरू विभिन्न वेब पृष्ठहरू मार्फत नेभिगेट गर्छन्, डाटा स collect्कलन गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसार यसलाई निकाल्दछ। वेब पृष्ठको सामग्री पार्स, पुनः स्वरूपित र खोजी गरिएको छ, जबकि डाटा स्प्रेडसिटहरूमा प्रतिलिपि गरिएको छ एक पटक निर्देशनहरू अनुसार पूर्ण प्रक्रियामा।
एक वेब पृष्ठ एचटीएमएल, पाइथन, र एक्सएचटीएमएल जस्तै पाठ आधारित मार्कअप भाषाहरू संग निर्मित छ। यसले जानकारीको धनी राख्दछ र मानवका लागि डिजाइन गरिएको हो, वेब स्क्र्यापिंग बट्सका लागि होईन। जे होस् , विभिन्न स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले यी पृष्ठहरू मानिस जस्तो पढ्न र CSV वा JSON ढाँचामा उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम छन्।
के पाइथन उत्तम वेब स्क्र्यापिंग भाषा हो?
पाइथन मूलतया एक प्रोग्रामिंग भाषा हो जुन सादा पाठको रूपमा डाटा स्क्र्याप गर्न "शेल" प्रदान गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई बिभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्न मद्दत गर्दछ। पाइथन उपयोगी छ जब डिजिटल मार्केटरहरू वा प्रोग्रामरहरू म्यानुअल रूपमा डाटा स्क्र्याप गर्ने निर्णय गर्छन्। यस भाषाको साथ, हामी सजिलै कोड लाइन प्रविष्ट गर्न सक्छौं र कसरी डाटा स्क्र्याप भइरहेको छ हेर्न सक्छौं। यद्यपि पाइथन उत्तम वेब स्क्र्यापि language भाषा होइन।
पाइथनसँग सयौं उपयोगी विकल्पहरू छन् हाम्रो समय बचत गर्नका लागि। उदाहरण को लागी, यो शैक्षिक र डाटा अनुसन्धान विशेषज्ञहरु बीच प्रसिद्ध छ। पाइथनले हामीलाई उपयोगी डाटा र शैक्षिक कागजातहरू अनलाइन खोजी गर्न सजिलो बनाउँदछ। तर जब यो वेब स्क्र्यापिंगको कुरा आउँछ, पाइथन सी ++ र PHP जत्तिकै प्रभावकारी हुँदैन। पाइथन यसको निर्मित समर्थनका लागि राम्रो चिनिन्छ र JSON र CSV जस्ता सामान्य ढाँचामा डेटा बचत गर्दछ।
वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम प्रोग्रामिंग भाषाहरू:
यो अब स्पष्ट छ कि अजगर वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम भाषा होइन। यसको सट्टामा, धेरै प्रोग्रामरहरू र डाटा वैज्ञानिकहरूले पाइथन भन्दा C ++, Node.js, र PHP रुचाउँछन्।
यो विभिन्न साइटहरू स्क्र्याप र क्रलिंगमा राम्रो छ। Node.js गतिशील वेबसाइटहरूको लागि उपयुक्त छ र इन्टरनेटमा वितरित क्रलिंगलाई समर्थन गर्दछ। यस भाषा दुबै आधारभूत र उन्नत वेबसाइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्नको लागि उपयोगी छ।
C ++ ले उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव गर्दछ र लागत प्रभावी छ। यो भाषा पाइथन भन्दा धेरै राम्रो छ र गुणस्तर परिणाम सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि यसको जटिल कोडहरूको कारण उद्यममा सिफारिस गरिदैन।
PHP वेब स्क्र्यापिंगका लागि उत्तम भाषा हो। पाइथन र C ++ जस्तो नभई, PHP ले समस्याहरू सिर्जना गर्दैन जब कार्यहरू निर्धारित गर्छ र बिभिन्न वेबसाईटहरूबाट सामग्री स्क्र्याप गर्दछ। यो एक अलराउन्डर जस्तै हो र वेब क्रलिंग र इन्टरनेट मा डाटा निकासी परियोजना को सबै भन्दा ह्यान्डल गर्दछ। Import.io र Kimono ल्याबहरू PHP मा आधारित दुई शक्तिशाली डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरू हुन्। तिनीहरूसँग उत्कृष्ट सुविधाहरू छन् र एक घण्टा वा दुई मा ठूलो संख्यामा वेब पृष्ठहरू खोप्न सक्छन्। दुर्भाग्यवश, सुन्दर सूप र स्क्रेपी (जुन पाइथनमा आधारित छ) ले कुनै समर्थन प्रदान गर्दैन PHP- आधारित डाटा निकाल्ने उपकरणको रूपमा।
अब यो स्पष्ट छ कि सबै प्रोग्रामिंग भाषाहरूको आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। PHP, तथापि, पाइथन भन्दा धेरै राम्रो छ र सबै भन्दा राम्रो वेब स्क्र्यापिंग भाषा हो। यसले प्रयोगकर्तालाई राम्रो सुविधा प्रदान गर्दछ र ठूला आकारका परियोजनाहरू सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्दछ।